फिरौतीमा गृहमन्त्रीका साइँला भाइ पक्राउ! spacekhabar
फिरौतीमा गृहमन्त्रीका साइँला भाइ पक्राउ!
दुई वर्षअघि राजधानीमा भएको एउटा हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्तसँग मिलेर फिरौती संकलनमा सक्रिय रहेको आरोपमा नरेश थापा पक्राउ परेका छन्। उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका साइँला भाइ हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको २०७४ असोज २३ गते घरबाट कार्यालय जाँदै गर्दा शान्तिनगरमा गाडीभित्रै गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। उक्त हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेतलाई तीन महिनापछि प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले भारतबाट पक्रेर ल्याएको थियो। यिनै समीरसँग नरेशको सम्पर्क जोडिएको देखिएको प्रहरीको दाबी छ।
पछिल्लो समय सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा रहेका समीरले थुनाभित्रैबाट फिरौति संकलन तीव्र बनाएको सूचना पाएपछि सिआईबीले गत साउन अन्तिम साता उनका सहयोगी पवन खण्डका र सुरेन नगरकोटीलाई समातेको थियो।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार, समीरले फिरौति संकलनमा खटाएका यी दुई व्यक्ति पक्राउ परेसँगै गृहमन्त्रीका भाइ नरेश अनुसन्धानमा तानिएका हुन्।पवन र सुरेन पक्राउपछि प्रहरीले उनीहरूको ‘कल डिटेल रेकर्ड’ समेत झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो । स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्रीका भाइ नरेश र पवनबीच ‘मिलेर काम गर्नुपर्छ’ भन्ने आशयका सन्देश आदानप्रदान भएको देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकारीले यो ‘मिलेर’ काम गर्नुलाई समीरकै योजनाअनुसार व्यापारी र व्यवसायीलाई धम्काएर फिरौती संकलन गर्नुको अर्थमा बुझेका छन् । सीआईबी स्रोतले ती अभियुक्तहरूसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहेर बसेको भेटिएपछि नरेशलाई पक्राउ गर्नुपरेको उल्लेख गर्‍यो । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका अधिकांश उच्च अधिकारीहरूले नरेश पक्राउको पुष्टि गरे तर त्यसबारे खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त नरेशको घटनामा कुन तहसम्मको संलग्नता हो र उनले फिरौती रकम ‘डिल’ गरेका हुन् कि हैनन् भन्नेबारे सीआईबीले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन ।
सीआईबीका प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मीले पक्राउ परेका पवन खड्का र सुरेन नगरकोटीलाई आपराधिक लाभ लिएको अभियोगमा मुद्दा चलाउने गरी आइतबार मात्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल बुझाइएको बताए । घटनामा नरेशको संलग्नताबारेको प्रश्नमा उनले भने, ‘मलाई ठ्याक्कै यसबारेमा थाहा भएन । अर्को पिलरले गरेको अनुसन्धान हो ।’ कान्तिपुरमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २६, २०७६, ०६:४४:००